कागतीका बिरुवामा पलाएको मुनाले किसान दङ्ग ! - नेपालबहस
कागतीका बिरुवामा पलाएको मुनाले किसान दङ्ग !
तारानाथ आचार्यः रासस
| १३:४१:२६ मा प्रकाशित
७ माघ, बलेवा । कान्लामा रहेका चिलौनेका रुखको फेदको ठुटो कुहिन थालेको छ । खेती मासेको भनेर ढलाइका रुखको ठुटो कुहिदैगर्दा खेतका गरा भने हराभरा हुँदैछन् । गत असारमा लगाएका कागतीका बिरुवामा पलाएको मुनाले बोटको रुप धारण गर्दै छ । बिरुवामा मुना मात्रै पलाएका छैनन् तिनै मुना हेरेर दङ्ग पर्ने किसानका मनमा आशा पनि पलाएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१२ को सहेलामा रहेको ठूलो फाँट यतिबेला कागतीका बिरुवामा पलाएको मुनाले सिँगारिएको छ ।
रुख र झारपात फाँडेर उजाड देखिने खेत नजिकैबाट नियाल्दा भने भविष्यको भाषा बोलिरहेको हुन्छ । खेती छाडेर खाडल खनेर कागतीको बिरुवा लगाउँदा धेरैले खेत बाँझो राखेको भनेर किसानलाई गाली गरेका थिए । अहिले हुर्किंदै गरेका कागतीका बिरुवाले प्रश्नहरुको जवाफ दिइरहेका छन् । सहेलाको यो फाँटमा रहेको खेतको मोही भने धेरै बागलुङ नगरपालिका– १४ मा बस्छन् । अर्माह गाउँमा बस्ने ४० किसानको समूह छ । ‘चासो किसान समूह’ले जमिन एकीकृत गरेर कागती लगाएको हो ।
“आम्दानीका लागि क्रमभङ्गता गर्नेपर्ने थियो, त्यो साहस हामीले गर्यौं’, समूहका अध्यक्ष केशव सुवेदी भने, “बिरुवा रोप्ने बेलासम्म के कसो हुने हो भन्ने थियो, अहिले मुना पलाए, हाम्रो आश जागेको छ ।” परम्परागत खेती प्रणालीले खर्चसमेत नउठेपछि बाली परिवर्तनमा लागेको सुवेदीले बताए । तीनसय रोपनी जमीनलाई एकीकृत गरेर कागती खेती थालिएको छ । यो वर्ष दुई हजार एकसय बिरुवा रोपिएको र बाँकी जमीनमा अर्को वर्ष बिरुवा लगाउने योजनामा किसान छन् ।
“हाम्रो सिकाइ पनि हो एकै पटक लगाउँदा उत्पादन पनि एकै खालको हुन्छ”, सुवेदी भन्छन्, “बिरुवा जस्तै उत्पादनमा पनि विविधताको लागि हामीले क्रमशः काम गर्ने सोच बनायौं ।” छिटो उत्पादन लिन हाँगा नर्सरी गरिएका बिरुवा र बीउबाट निकालिएका बिरुवा दुबै लगाइएको छ । किसानले कागती खेती आफ्नै बलबुताले शुरु गरेका हुन् । अहिले भने सरोकारवाला निकायको ध्यान तानिएको छ । एक रोपनी जमीनको प्रतिवर्ष रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने गरी जमीन एकीकृत गरिएको थियोे । यो वर्षको वर्षे फसल आउने समयमा जग्गाधनीलाई रकम उपलब्ध गराइने छ ।
अधिकांश किसान समूहमा आबद्ध रहेकाले उनीहरुको शेयर वृद्धि गर्ने योजनामा समूह छ । अहिले सय रोपनी जमीनमा बिरुवा लगाइएको छ । बाँकी २०० रोपनी जमीनमा बिरुवा लगाउन स्थानीय सरकार र सरोकारवालको समेत चासो बढेको वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खत्री बताए । “हामीले यो काममा प्रोत्साहन गर्छौं, किसानले समूहमा उत्पादन गर्न थाले भने आम्दानी र रोजगारी दुबै बढ्छ”, खत्रीले भने, “वडा, नगर र प्रदेशका कार्यक्रममा यो परियोजना समावेश हुन्छ ।” नगरपालिका वडा कार्यालयका साथै कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसमेत उनीहरुको खेती हेर्न पुग्न थालेका छन् ।
बिरुवा, सिँचाइ र व्यवस्थापनको लागि सहयोग जुट्न थालेको समूहले जनाएको छ । दुई जना किसानलाई कर्मचारीको रुपमा परिचलन गरेर खेतीको रेखदेख, मल र सिँचाइ गर्न थालिएको अगुवा किसान ढाकाराम सुवेदीले बताए । अहिले मुना पलाएको कागतीले चार वर्षमा फसल दिने उनले बताए। समूहले दुई हजार १०० बिरुवाका लागि मात्रै रु ४० लाख खर्च भएको जनाएको छ । अझै बाँकी जमीनमा बिरुवा लगाउँदा खर्च बढ्छ । “अहिलेको खर्च मात्रै हेरेका छैनौं, भोलिको आम्दानीको पनि हिसाब गरेर काम थालेका हौ”, सुवेदीले भने,“पहेँलपुर कागती सुन जस्तै टल्काउने लक्ष छ ।” चार वर्षपछि एउटै बिरुवाले दश बिरुवा बराबरको खर्च उठाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
बजारमा कागतीको माग र मूल्य राम्रो रहेकाले उनीहरुले व्यावसायिक खेती थालेको बताए । अहिले स्थानीय बजारमा कागतीको मूल्य प्रतिकिलो रु २२० पर्छ । एउटा वयस्क कागतीको राम्रो बोटले वर्षमा १०० किलोभन्दा धेरै उत्पादन दिनसक्छ । उनीहरुले कागतीका लागि मल र किसानको थप सहभागिता वृद्धिका लागि सोही जमीनमा गाई फार्म र भित्री बालीकोसमेत योजना बनाएका छन् ।
अनुदानको रकम लिन नक्कली किसान बन्नेको होडबाजी २० घण्टा पहिले
जडीबुटी खेती मेन्था किसानको रोजाइ २३ घण्टा पहिले
घरदैलोमा अण्डा पुर्याउदै किसान दाना उद्योग ५ दिन पहिले
मौसम अनुकूलका कारण तोरी उत्पादनमा वृद्धि १ हप्ता पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? १८ मिनेट पहिले
नेपाली राष्ट्रबादको पक्षमा उभियो परिवार दल ३६ मिनेट पहिले
भाेली पाँचौं संस्करणको ‘र्याली अफ होप’ हुँदै, विश्व नेताहरुले सम्बोधन गर्ने ४३ मिनेट पहिले
औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत अधिकृत घुससहित पक्राउ २० घण्टा पहिले
प्रोत्साहन अभियानले दुई वर्ष बाँझो रहेको जग्गा खेतीयोग्य बन्दै २३ घण्टा पहिले
भिरबाट लडेर एक पुरुषको मृत्यु २१ घण्टा पहिले
कांग्रेसका नेता जोशीको नशा फुटेर मस्तिष्कमा छरिएको रगत निकालियाे १५ घण्टा पहिले
थप पाँच हजार क्विटल धान खरीद गर्दै खाद्य कम्पनी ३ दिन पहिले
दाङमा कोइला खानीमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु ४ दिन पहिले
हिमपातबाट बन्द विद्यालयको पठनपाठन शुरु ६ दिन पहिले
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १८ जुवाडे नियन्त्रणमा ३ दिन पहिले
बालबालिकालाई विद्यालयमा दिइने दिवा खाजाको तालिका सार्वजनिक ६ दिन पहिले
मिस एण्ड मिस्टर विराटनगर प्रतियोगिता चैतमा हुने २ हप्ता पहिले
राससको ६० औँ वार्षिकोत्सवमा राससकर्मी पुरस्कृत १ हप्ता पहिले
असिनापानीका कारण करोडौँको बाली नोक्सान १० महिना पहिले
इराकमा शिक्षा मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेकाले सरकार अझै अपूर्ण २ वर्ष पहिले
पार्टी एकता देखेर के गरेर बिथोल्न सकिन्छ भन्नेहरु बढ्दैछन् :- प्रचण्ड २ वर्ष पहिले
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भेरी-बबई डाइभर्सन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ हुने २ वर्ष पहिले